u-Lee no-Luus bashaye ama-Proteas anqoba ngerekhodi
Inhlanganiso emangazayo yama-runs awu-144 phakathi kwa-Lizelle Lee no-Sune Luus yakhe indlela yokuthi ama-Proteas Esifazane anqobe ngama-runs awu-105 okube irekhodi behlula i-India kumdlalo wabo wokugcina we-Twenty20 International e-Lalbhai Contractor Stadium e-Surat ngoLwesihlanu.
Bobabili abavula umdlalo ngokushaya bathole o-50, u-Lee wathola i-career-best u-84 emabholeni awu-47 (15 fours, 1 six) futhi ukapteni u-Luus ushaye u-62 emabholeni awu-56 (7 fours).
Lokho kusize izivakashi zihlanganise u-175 kuphume izinti ezintathu, umphumela wabo omkhulu kuma-T20I bedlala ngaphandle, u-Nadine de Klerk (3/18) ehola ukushwiba okuhle okusize ekukhipheni iqembu lasekhaya ngama-runs awu-70.
Kunike ama-South Africans ukunqoba okukhulu kunawo konke behambile futhi i-India ukuthi ithole ama-runs amancane ekhaya kuma-T20I.
Awushintshanga lutho umphumela kwi-series, ngoba ama-Indians asheshe anqoba i-series enemidlalo eyisithupha.
Kodwa, iqembu lika-Hilton Moreeng lingathatha ukuzithemba kulomdlalo kuyela kwimidlalo yosuku olulodwa kuhambo.
Kube owodwa yemidlalo emihle kakhulu kuma-Proteas evakashile futhi konke kuhlelwe i-Player of the Match u-Lee no-Luus. Bobabili baqale kahle emuva kokuthi ukapteni anqobe i-toss futhi bashaya, inhlanganiso yabo yaba ama-overs awu-15.5.
u-Mignon du Preez (13) udlale indima ngasekugcineni kwavumela izivakashi zibeke u-176 – umphumela wabo omkhulu ngaphandle kwasekhaya, kwadlula umphumela wabo wokugcina omuhle u-166 kuphume izinti ezine bedlala ne-England e-Taunton ngonyaka odlule.
u-Shabnim Ismail (2/11) no-Ayabonga Khaka (1/9) balikhathaze ekuqaleni iqembu lasekhaya okushiye abashaya phezulu enkingeni nama-runs awu-10 kuphume abathathu nge-over yesine.
u-De Klerk udlale indima ngokuhlasela kabili kwi-over yesihlanu njengoba ama-Indians afike ku-13 kuphume abahlanu bese kwaba u-13 kuphume abayisithupha ngesikhathi u-Ann Bosch (2/13) ehlasela futhi ngenti yesithupha.
u-Veda Krishnamurthy (26) no-Arundhati Reddy (22) basize iqembu labo lingaphoxeki kakhulu, ngaphambi kokuthi u-Nondumiso Shangase (2-0) akhiphe izinti ezimbili emabholeni amathathu ukuphetha ukunqoba okukhulu – iqembu lasekhaya likhishwe kuma-overs awu-17.3 kwaba umphumela uyirekhodi omncane bedlala ekhaya.
Banqobe i-series ngo-3-1 kodwa ama-South Africans azobe ezimisele ngokudlala kahle uma kuqala imidlalo emithathu yosuku olulodwa ngoLwesithathu.
u-Elgar no-De Kock bashaye amakhulu okuqala kuma-Test e-India osukwini ama-Proteas engaphezulu i-India inwebe ukuba ngaphezulu kwama-Proteas Women SA u19s start World Cup preparations Ama-Proteas Esifazane anethuba lokubuyela kwimidlalo i-India ingaphezulu ngosuku lokuqala le-Test series Ama-Proteas Esifazane ahlulwe ngama-runs awu-51 "Angeke sigxile kwisimo" - u-Markram U-Maketa: Uhambo lwe-SA A lusize abadlali bama-Test kakhulu u-Beuran Hendricks ubeke ama-Proteas endleleni yokunqoba u-Markram ngumdlali ovelele kumdlalo wesibili wezinsuku ezine ophelile Markram and Mulder hit big centuries- Zulu translation